सचेतना र संयमको समय
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना भाइरसबाट जनतालाई जोगाउन देशभित्र र बाहिरको आवतजावतमा कडाइ गरिने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनअनुसार देश करीब करीब लकडाउनको अवस्थामा पुगेको छ । तर, सम्बोधनमा भनिएअनुसार न त सरकारी निकायले नै कडाइ गरेको पाइन्छ न त जनता नै सचेत भएको देखिन्छ । यस्तोमा कोरोना भाइरसको संक्रमण कथंकदाचित् आइहाल्यो भने त्यसले भयावह रूप लिने अवस्था अझै यथावत् छ ।
यस्तो बेलामा सकेसम्म घरभित्र नै बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपयले यस्तो बन्दको मौकामा घुमघाम र भेटघाट गरेको पनि देखिन्छ । पढेलेखेका व्यक्तिहरूबाटै यस्तो हुनु चरम लापर्बाही हो ।
कुनै पनि देशका लागि कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास नयाँ हो । त्यसैले यसका लागि केकस्तो सतर्कता अपनाउने र उपचार गर्ने भन्नेमा नै अन्योल छ । यस्तोमा चीनले वुहान शहरलाई लकडाउन गरेर प्राप्त गरेको सफलतालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई नमान्दा नै इटालीमा अहिले कोरोनाको संक्रमण सबैभन्दा भयावह देखिएको हो । यस्तोमा सरकारले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा त्यसलाई अवलम्बन गर्नु नै तर्कसंगत हुने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासले देखाएको छ ।
नेपालमा हालसम्म कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन । एकजना संक्रमित निको भइसकेको बाहेक अन्य कुनै संक्रमित फेला परेका छैनन् । यो सुखद खबर हो तर ढुक्क भएर बस्ने समय भने होइन । सरकार र चिकित्सकहरूले बताएका सचेतनाका विधि नअपनाउने हो भने नेपालमा भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।
अहिले सरकारले अत्यावश्यक काम नपरी घरबाहिर ननिस्कन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै साबुन पानीले हात धुन, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न र आफूलाई समाजबाट अलग्ग राख्न पनि सरकारले सचेत गराइरहेको छ । तर, अझै मानिसहरू असुरक्षित किसिमले हिँडडुल गरिरहेका छन् । सरकारको विद्यालय र कलेजहरू बन्द गरिसकेको छ । आइतवारदेखि अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालयबाहेक सबै कार्यालय बन्द रहनेछन् । यस्तो बेलामा सकेसम्म घरभित्र नै बस्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपयले यस्तो बन्दको मौकामा घुमघाम र भेटघाट गरेको पनि देखिन्छ । पढेलेखेका व्यक्तिहरूबाटै यस्तो हुनु चरम लापर्बाही हो । शनिवार गड्डाचौकीको घटनाले नेपाल–भारत सीमा चाँडोभन्दा चाँडो बन्द गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखाएको छ । त्यसस“गै कोरोना भाइरस परीक्षका लागि आवश्यक पर्ने कीटको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । त्यस्तो कीटको व्यवस्था गरी बढीभन्दा बढी परीक्षण गरेर मुलुकलाई संक्रमणबाट बचाउन सकिन्छ ।
सरकारले लिएका निर्णयले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । जनताको जीवन जोगाउन अर्थतन्त्रमा जोखिम निम्त्याएर पनि सरकार बन्द घोषणा गर्न बाध्य भएको हो । यस्तोमा सरकारले दिएका सुरक्षासम्बन्धी निर्देशनलाई पालना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । नागरिकले गर्ने सानो असावधानीकै कारण इटालीमा संक्रमण भयावह बन्न पुगेको तथ्य बिर्सनु हुँदैन ।
प्रकोपको सन्त्रास फैलिएका बेला जनता पूर्णतः सरकारले दिने सूचना र सेवामा आश्रित हुन्छन् । त्यसो हुँदा जनतालाई सही र पारदर्शी सूचना दिनुपर्छ । तर, अहिले सरकारले लिएका निर्णय र दिएका निर्देशन कतिपय आफैमा बाझिएका वा अन्योलपूर्ण देखिन्छन् । जस्तै लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द भनिएको छ । निजी सवारीसाधनमा चाहिँ जान पाइने हो ? अथवा छोटो दूरीका सवारीसाधनले चाहिँ कोरोना भाइरस नसार्ने हो ? यी सबै कुरालाई स्पष्ट नपार्दा अनावश्यक र निराधार हल्लाले प्रश्रय पाउँछ र जनता झनै त्रस्त हुन्छन् ।
त्यसैले सरकारले कोरोनासम्बन्धी सूचना, निर्देशन र निर्णयहरू एकीकृत रूपमा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा अन्योल नहोस् भन्नेमा पनि ध्यान जानु जरुरी छ । एउटै निर्णय पनि एकाध घण्टामै सच्याएर दिँदा त्यसले भ्रम सृजना गरेको छ । त्यसैले कोरोनाविरुद्ध सरकार र जनताको एउटै बाटो र एउटै लय हुनु जरुरी छ । अन्यथा सरकारको प्रयास खेर जानेछ । साथै, मुलुक संक्रमणको चपेटामा नफस्ला भन्न सकिँदैन ।